Iidipozithi ezinxulunyaniswe ne-Eurostoxx 50 | Ezezimali
Elinye lamaqhinga afumanekayo kubatyali mali abancinci naphakathi ukuze benze imali abayongayo ngaphandle kokuthatha umngcipheko kukudibanisa iidipozithi zebhanki zexesha elimisiweyo kwisalathiso seEurostoxx 35. Le fomati yotyalo-mali inenzuzo yokuba ndiya kuhlala ndinayo Imali eqinisekisiweyo banegalelo kule mveliso yezemali kwaye banakho ukufumana umdla kubo. Ukufumaneka kwezinye zeebhanki ezisebenza kwilizwe lethu.
Olu didi lweemposos lufuna imfuneko esisiseko kwaye ayikho enye ngaphandle kwesalathiso sesitokhwe ukufikelela kwinqanaba kwixabiso laso. Ukuba oku akuphumelelanga, kuphela ubuncinci bokusebenza obuya kufezekiswa, oko kukuthi ngaphantsi kwe-0,5%. Ngendlela emiselweyo neqinisekisiweyo nantoni na eyenzekayo kwiimarike zezabelo. Ngale ndlela, ukonga kuya kuqinisekiswa kwimeko engalunganga yotyalo-mali.
Kwelinye icala, yimodeli yokonga ejolise kwiprofayili echazwe kakuhle yabatyali mali. Ngemodeli yomsebenzisi okhuselayo ebeka ukugcinwa kwenkunzi yayo kuqala ngaphezulu kwezinye izinto ezinengcwangu. Nokuba indleko yokuyeka ukunyuka kwisalathiso somgangatho waseYurophu. Kungenxa yokuba asinakulibala ukuba elona zinga liphezulu lenzala kolu hlobo lwedipozithi yi-5%.
1 I-Eurostoxx 50: ukunyuka kwamaxabiso
2 Zithini izibonelelo zayo?
3 Izithunzi zala maxesha abekiweyo
4 Ngomnikelo owahlukeneyo
I-Eurostoxx 50: ukunyuka kwamaxabiso
Le mveliso yemali ibonakalisiwe ngenxa yokuba ikhontrakthi yayo ayibandakanyi naluphi na uhlobo lweekhomishini kunye nezinye iindleko kulawulo nakulondolozo lwayo. Ngelixa kwelinye icala, inexesha lokuphelelwa lixesha ngeenxa zonke iinyanga ezingama-24 nama-36. Ingaphezulu kancinci kunakwisimo sendabuko kwaye kuzo zonke iimeko ukucinywa kwabo ngokuyinxalenye okanye ngokupheleleyo akuvumelekanga. Esi sisithintelo esinzulu kubasindisi kuba abayi kuba nakho ukufumana imali yabo ixesha elide. Ke ngoko, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokulinda ukuphela kwayo. Kwesinye sezithunzi zale mveliso ekhethekileyo yezemali.
Kwelinye icala, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba ezi dipozithi zekota zinamaxabiso aphezulu asezantsi okutyala. Malunga ne-5.000 kunye ne-10.000 euroNgaphandle kokukwazi ukuzihlaziya konke konke kuba ziyimveliso engenakho ukuqhubeka ngokuhamba kwexesha. Ukuba, nangayiphi na imeko, yenye yeempawu ezibalaseleyo kunye neendlela ezintsha zokonga. Njengenye indlela ethe gabalala yokutyala imali ngokuthe ngqo kwiimarike zezabelo, kule meko inxulunyaniswa nebhentshi yakudala yelizwekazi, i-Eurostoxx 50.
Zithini izibonelelo zayo?
Ukugcinwa kwemali eyinkunzi yenye yeendawo eziphambili zenkxaso kwezi mveliso zebhanki. Kungenxa yokuba ngale ndlela kunokwenzeka ukuba kupheliswe ilahleko kwimarike yemasheya. Ngelixa kwelinye icala, kunokwenzeka ukuvelisa okungaphezulu Ulwahlulo lotyalo-mali kuba ixabiso elinye okanye nangaphezulu yengeniso eguquguqukayo ayinakhontrakthi. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, eli nyathelo liqhutywa kwenye yezona ndawo zintle kwimarike yaseYurophu. Apho ii-equities ezimeleyo ezingama-50 eYurophu zidityanisiwe.
Enye yeenzuzo zayo ezintle kukuba akuyomfuneko ukutyala imali eninzi. Kodwa ngokuchaseneyo, kwanele iimali ezithobekile onke amakhaya. Ukongeza, kwezinye iimeko bayancedisana nezinye ii-asethi eziyimali ezivela kwingeniso esisigxina kwaye yiyo loo nto ibangela imbuyekezo ethembekileyo neqinisekileyo ekupheleni kokuvuthwa kwabo. Ngaphandle kweekhomishini kunye nezinye iindleko kulawulo lwazo ezinokuthengwa kunye nokuthengiswa kwezabelo kwimarike yemasheya. Kuhlobo lomsebenzisi ongasetyenziswanga ukutyala imali yakhe kwiziphumo zezabelo.
Izithunzi zala maxesha abekiweyo
Kuyinyani ukuba ayizizo zonke izibane kwiidiphozithi ezinxulunyaniswe ne-Eurstoxx 50, kodwa kukho izinto ezithile ezimbi ekufuneka ziqwalaselwe kwisivumelwano sabo. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu inento yokwenza nayo Ilahleko zilinganiselwe enokuveliswa kwimarike yezemali yaseYurophu. Ngaphaya kokunye ukuqaphela ubuchwephesha bendalo kunye nokujonga izinto ezisisiseko.
Ngelixa ngokuchaseneyo, kukho ezinye iimveliso zezi mpawu zinxulunyaniswa nezinye ii-indices zomhlaba wonke. Njengokomzekelo, kweyona ndawo imele uqoqosho lwehlabathi: "Ibex-35 "," i-Eurostoxx-50 "," iDax "," uDow Jones "," iNasdaq edityanisiweyo "," iS & P " okanye "Nikkei”. Banokuqeshwa ngokusekwe kukhetho lwabatyali mali okanye izikhombisi abazifumana kwiziko lezemali apho baya kubaqesha khona. Ezinye zenziwe ngokukodwa yeeprofayili ezilondolozayoNgelixa abanye besalatha kubatyali mali abanoburhalarhume, oko kuthetha ukuba kukho umngcipheko othile ekuqeshweni kwabo.
Oku kwahluka kwesibonelelo kuthetha ukuba ukhetho olubanzi lwezinto ezinqabileyo lunokufumaneka kwiimarike ezidweliswe kwiimarike eziphambili zehlabathi, ukusuka "Iichips eziluhlaza”Ukusuka kwingeniso yesizwe (i-Endesa, Iberdrola, i-BBVA, iSantander kunye neTelefonica) ukuya kwezinye ezingaziwayo kumtyali mali ophakathi AmaFrentshi, amaJamani okanye amaxabiso amaTaliyane. Ngayiphi na imeko, olu didi lweedipozithi zexesha lusekwe kwiibhasikithi zokhuselo ezisekwe kwiinkampani ezifanelekileyo ngokukodwa. Ngevolumu ephezulu kakhulu yeemali ezinkulu ezenza imithombo yesalathiso kubo bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ukuze ngale ndlela, ilahleko eyomeleleyo ingenakwenziwa kwiiphothifoliyo zotyalo-mali okanye ubuncinci ezi zinomda. Apho isiphumo sayo esiphambili kukuqulatha ukwehla okunokubakho kolu hlobo lweemarike zezabelo. Njengamanqaku okwahluka ngokubhekisele kwiidipozithi zebhanki zemveli kwaye akukho meko iphantsi kokumiselwa kwekhomishini kunye nezinye iindleko kulawulo okanye kulondolozo lwabo. Ukuze ukusukela ngoku ukutyala imali kwimarike yemasheya kube lula ngakumbi kunakwindlela ethe ngqo yokuthenga nokuthengisa izabelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iidipozithi ezinxulunyaniswe ne-Eurostoxx 50